စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူ… | ဥက္ကာကိုကို
စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူ…	Posted by oakkarkoko on January 19, 2013
““စက်ရုံအတွင်းကွမ်းတံထွေးမထွေးရ၊ ပါးရိုက်မည်””ဟူသော ခပ်ကြမ်းကြမ်း၊ အမိန့်ဆန်ဆန်စည်းကမ်းချက် များမှစ၍ …. ““သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိုးပါ”” ဟူသောဆောင်ပုဒ်အလယ်…. ““သတိ၊ ခွေးရှိသည်””ဟူသော သတိ ပေးသံအဆုံး… မြန်မာနိုင်ငံ၏နေရာအနှံ့တွင် စည်းကမ်းချက်များ၊ ဆောင်ပုဒ်များ၊ သတိပေးစာ များဖြင့် ပြည့်နှက်လျှက် ရှိပါသည်။
သတိပေးခြင်း၊ စည်းကမ်းထုတ်ခြင်းများသည် ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုအသွင် စာတန်းများအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။ ထိုအရာများကို မိမိအိမ်ရှေ့မှစကာ နေရာ အနှံ့မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ တချို့သောစာတန်းများက ယဉ်ကျေးစွာ၊ တချို့သောစာတန်းများက ရိုင်းပျစွ၊ တချို့သောစာတန်းများက ပုံမှန်သာ… စသဖြင့် မိမိပြောလိုသော အဓိပ္ပယ်တစ်ရပ်ကို သရုပ်ဖော်ထားကြလေ့ရှိသည်။
ထိုစာတန်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လူမြင်ကွင်းထဲသို့ ပေါများပြည့်နှက်စွာ ၀င်ရောက်နေကြပါသနည်း။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်သာ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားဒေသများတွင်လည်း စည်းကမ်းချက်များစွာ ထုတ်ပြန်ထားတတ်ကြသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ များပြားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့် ရသမြောက်သောဆောင်ပုဒ်များကို မမြင်ချင် အဆုံး ပိုမိုတွေ့ရှိနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက စည်းကမ်းချက်ထုတ်ရတာ သိပ်သဘောကျကြပုံရသည်။ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ စာတန်းလေးများလိုက်ကပ်ကြသည်။ သူတောင်းစားက ကပ်သည်။ လက်ဆော့သူကကပ်သည်။ အစိုးရက ကပ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာက ကပ်သည်။ အဲသလို လူပေါင်းစုံက စာပေါင်းစုံကို နေရာပေါင်းစုံမှာ လျှောက်ကပ်ထားကြတာ တွေ့ကြ ရပါမည်။
စည်းကမ်းများစွာ၊ စာရွက်ပေါင်းများစွာ လူမြင်ကွင်းရှေ့ထွက်ပေါ်လာရခြင်းမှာ စည်းကမ်းမဲ့သူတွေ များလာ သော ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ လူရှိန်အောင်လက်ဆော့သူတွေများလာတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုစာများတွင် ရသလေး တွေလည်း ပါနေတာကိုလည်း တွေ့မြင်ရသည်။ တချို့စာတွေက ဖတ်ပြီးပြုံးရသည်။ တချို့စာတွေက ရယ်မောရ သည်။ တချို့က မခံချိမခံသာဖြစ်စေရသည်။ တချို့ကတော့ ဒေါသထွက်စရာဖြစ်ရသည်။
သစ်တောဝန်ကြီးဌာနက သစ်တောကြိုးဝိုင်းများတွင်ကပ်ထားသော ဆိုင်းဘုတ်ငယ်များကို မြင်ဖူးကြမည်။ ““သစ်တစ်ပင်ခုတ်၊ ထောင်သုံးနှစ်””တဲ့။ ဂျာနယ်တစ်စောင်ထဲမှာ ပါခဲ့သော ကာတွန်းတစ်ပုဒ်ကိုသတိရသွားသည်။
““သစ်တစ်ပင်ခုတ်ထောင်သုံးနှစ်တဲ့… တစ်တောလုံးခုတ်တော့ သူဌေးဖြစ်ရော””ဟူ၍။ သရော်မှုလေးထဲမှာ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးပါလာသည်။
ထိုမှဆက်၍ စဉ်းစားကြည့်ပါလျှင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဘေးမှာချိတ်ကာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပြုမူ နေကြသူများကို တွေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။
““ဆေးလိပ်မသောက်ရ”” ဆိုသည့် ကားပေါ်ကစာတန်းအောက်မှာ ယာဉ်မောင်းသူတစ်ဖွာ၊ စပယ်ယာ တစ်ဖွာဖြင့် ငြိမ့်ငြိမ့်လေးမောင်းနှင်နေကြတာကိုလည်း တွေ့ဖူးကြပါမည်။
““ကွမ်းတံတွေးမထွေးရ”” ဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်ကလေးခမျာ ကွမ်းတံတွေးများဖြင့် ကြဲပက်ခံထားရသည် ကို တွေ့ဖူးကြပါမည်။
““အမှိုက်မပစ်ရ””ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်ယိုင်နဲ့နဲ့ကလေးက အမှိုက်ပုံကြီးကြားမှ သနားစဖွယ်ထိုးထွက်နေ သည်ကို မြင်ဖူးကြပါမည်။
““ခရီးသည်များ၏ အသက်သည် သင့်လက်ထဲတွင်ရှိသည်””၊ ““သင်နှင့်သင့်မိသားစုက ဘေးမသီရန်မခဘဲ အိမ်ပြန်လာချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေသည်ကိုသတိရပါ””ဟူသည့် စာတန်းကို ရှေ့မှာကပ်ပြီး ဘတ်စ်ကားပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်နေကြသည်ကို အသည်းတယားယားဖြင့် စီးဖူးကြပါလိမ့်မည်။
အကြောင်းပြချက်အရာမှာလည်း မရိုးကြပါပေ။ မြန်မာစကားကလည်း ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ဆို တော့ အဆင်ပြေနေကြ ပါသည်။ အမှိုက်မပစ်ရ ဆိုသောကြောင့် မပစ်ကြ။ အသာအယာပင် စနစ်တကျစုပုံခဲ့ကြသည်။
ဆူးလေမီးပွိုင့်မှာ ““ဤနေရာမှလမ်းဖြတ်မကူးရ၊ ဂုံးကျော်တံတားပေါ်မှကူးပါ””ဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်ကို ခပ်တည်တည်ခွကာ အတင်းဖြတ်ကူးနေကြသူတွေကို မော်တော်ပီကယ်တွေက ခရာကိုတရွှီးရွှီးမှုတ်ပြီး လိုက်တားကြ ရရှာသည်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးက ကားကြီးတွေပေါ် အတင်းတက်ခိုင်းနေသောကြောင့် စည်းကမ်းမဲ့လမ်းဖြတ်ကူးမှုများ လျော့သွားသည်။
တစ်ခါကကြုံဖူးသည်။ အဘွားကြီးတစ်ယောက် တုန်ချိချိဖြင့်ဝင်ရောက်တောင်းရမ်းသည်။ ဆိုင်ရှင်ကအော်ထုတ်သည်။
““အဘွားက စာမဖတ်တတ်လို့ပါကွယ်””တဲ့။ ဆိုင်ရှင်ဘာပြောရမှန်းမသိ။
အဲ့သည်လို စာမဖတ်တတ်သူတွေက စည်းကမ်းချက်ကိုမသိ။ စာဖတ်တတ်သူတွေကလည်း တမင်မမြင်ချင် ယောင်ဆောင်ကြသည်။
““ဤနေရာတွင်သေးပေါက်ရန်မဟုတ်””ဟုရေးထားသော စာတန်းအောက်မှာ တစ်ယောက်က ထပ်ဖြည့်ပေးထားတာတွေ့ဖူးသည်။ ““ညာဖက်နားမှာသွားပေါက်ပါ””ဟူ၍။ တချို့ကတော့ နင့်နင့်နဲနဲရေးသည်။ ““ဒီနေရာမှာ ခွေးများသာသေးပေါက်ရန်””ဟုဖြစ်သည်။ စာတမ်းကထိရောက်သလားတော့မသိ။ ခွေးရောလူရော လစ်သလိုပေါက်ကြသည်။
ဟာသလေးတစ်ပုဒ်ကြားဖူး၏။ ပွဲခင်းထဲမှာဇာတ်ကနေသည်။ မူးနေသောလူနှစ်ယောက်က ဇာတ်ပွဲကြည့် ချင် ကြ၏။ သူတို့မှာ ပိုက်ဆံကမရှိ။ သို့နှင့် ဇာတ်ရုံဘေးကထရံကို အပေါက်လေးဖောက်ပြီး ၀င်ကြသည်။ ရိုးရိုးတိုးဝင်တာ မဟုတ်။ လေးဖက်ထောက်ပြီး နောက်ပြန်ကြီး ဖင်နဲ့တိုးဝင်တာဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးကဓာတ်မီးတ၀င်းဝင်းနဲ့ ရောက်လာ သည်။ သူတို့ ကိုမြင်တော့ အလန့်တကြားတား၏။““ဟေ့လူတွေ…. ဒီအပေါက်ကထွက်လို့မရဘူး.. ပြန်ဝင်စမ်း.. ပြန်ဝင်စမ်း””ဆိုပြီး အတင်းထိုးထည့်သည်။ သူတို့လည်း ဇာတ်ရုံထဲ အေးဆေးလေးရောက်သွား၏။
တချို့ခြံဝန်းရှေ့၊ ဆိုင်ခန်းရှေ့တွေမှာ ““ခြံလုံးဝမရောင်းပါ။ ဆိုင်လုံးဝမငှားပါ””ဟု စာရေးကပ်ထားရသည် အထိ ပွဲစားများကလည်း သောင်းကျန်းကြသည်။
““ခုံပြည့်လျှင်လူပိုမတင်ပါ””ဆိုပြီး အထူးကားတွေက ပုရွက်ဆိတ်တောင် နေရာမရ။ နောက်ထပ် နာမည်ကျော် စာတန်းတွေရှိသေးသည်။ အားလုံးလိုလိုက လိုက်နာမှုနည်းပါးသည့်စာတန်းတွေဖြစ်သည်။
““လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ..တို့ရန်သူ”” ““မှုခင်းကင်းစင်ရက်သတ္တပတ်”” ““ဝန်ထမ်း ကောင်းမှ နိုင်ငံကောင်း မည်”” ““ယာဉ်တိုက်မှုကင်းစင်ရေးနေ့”” ““ကားတံခါးကိုဖြည်းဖြည်းပိတ်ပါ”” ““သင့်လုံခြုံရေးအရ စစ်ဆေးသည်ကို ကြည်ဖြူစွာလက်ခံပါ”” ““ခါးပိုက်နှိုက်သတိပြု”” ““ဆင်းမည့်မှတ်တိုင်ကို ကြိုပြောပါ”” ““ရှေ့တွင်ကျောင်းရှိသည်၊ ဖြည်းဖြည်းမောင်းပါ”” ““မည်သူ့ကိုမှ အကြွေးမရောင်းပါ”” ““ဟွန်းမတီးရနယ်မြေ”” ““ကျေးဇူးပြု၍တန်းစီပါ””
““သင့်ကြောင့်မီးမလောင်ပါစေနှင့်”” ““ပညာရေးဖြင့် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဆီသို့”” ““ဆိုဖာပေါ်သို့တက်မထိုင်ရ”” ““သင်ကောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်မဆိုးပါ”” ““ထမင်းကျွေးသောလက်ကိုပြန်မကိုက်ပါနှင့်”” ““သတိ..ဗို့အား ၂၅၀၀”” ““လူလိုသိပါ”” ““သင်တန်းအတွင်းစကားမပြောရ”” ““မျဉ်းဝါမကျော်မီဝယ်ယူထားသည်များ ကို ငွေပေးချေပြီးမှ ဆိုင်အတွင်းမှထွက်ခွာပါ”” ““ဆိုင်အတွင်းသို့ တိရိစ္ဆာန်များခေါ်မလာရ””
““ကားပိတ်မရပ်ရ”” ““ညအိပ်လက်မခံပါ”” ““လူသာလာပါ၊ ပြဿနာခေါ်မလာပါနဲ့”” ““ပိုက်ဆံချေးခြင်း သည်းခံပါ”” ““ipayကတ်သုံးပြီးစီးနိုင်ပါသည်”” ““ယနေ့ရောင်းရငွေသည် မနက်ဖြန်အတွက်အရင်းဖြစ်သည်”” ““ဘယ် အရာမှ အလကားမရပါ”” စသည့်… စသည့် … စသည့်…။
စာတန်းတွေ၊ ကြေငြာချက်တွေ၊ စည်းကမ်းတွေ…. လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ နေ့တဓူဝ ပလူပျံလာနေသည်။ လူမှုဘ၀ခရီးလမ်းမှာ စောင့်ထိန်းစရာတွေများလာနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းများပြားလာသော စာတန်းများကို လူအများ က အပြည့်အ၀လိုက်နာကြပါသလား။ သင်ရော ကိုယ်ပါ စနစ်တကျလိုက်နာခဲ့ဖူးပါသလား။ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါ သည်။
အသေးအမွှားစည်းကမ်းချက်များကိုဖယ်၍ အကြီးမားဆုံးဖြစ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အသက် ဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတောင်မှ အပြည့်အ၀လေးစားလိုက်နာဖူးကြပါသလား။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမို့လို့ဟု ဆိုဆို၊ လက်ရှိလိုက်နာနေရသော ထိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အမြဲတစေဆက်ဆံနေရသည့် လွှတ်တော်အမတ်များ အားလုံးလိုလိုပင်လျှင် ဖွဲ့စည်းပုံစာအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို အပြည့်အ၀ ကျေညက်အောင်သိရှိကြပါသလား။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ညင်သာစွာကူးပြောင်းလျှက်ရှိသည်။ ထိုအကူး အပြောင်းတွင် နိုင်ငံသားအားလုံး စနစ်တကျပါဝင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ““လုပ်ချင်တာလုပ်၊ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်””သည့် ခေတ်တစ်ခေတ်ကုန်ဆုံးခဲ့ပါပြီ။ မကုန်ဆုံးသေးဟု သံသယရှိလျှင်လည်း ကုန်ဆုံးအောင်လုပ်ရန်မှာ အားလုံးတာဝန် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်က နွယ်နီမဂ္ဂဇင်းတိုက်လှေကားမှာ ကပ်ထားတဲ့စာတန်းလေးကတော့ လှပသည်။ ဖတ်ရတာလည်း အဆင်ပြေသည်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေအထားရောက်အောင် ဖန်တီးနိုင်သည်ဟုထင်သည်။ ““ဒီနေရာလေးမှာ ကျွန်တော်တို့ အမှိုက်မပစ်ဘူး။ ကွမ်းတံထွေးမထွေးဘူးနော်””တဲ့။ ရိုးရိုးလေးပင်။ ကြားနေမြင်နေကျ စည်းကမ်းတစ် ရပ်ကို သိမ်မွေ့စွာရေးသားထားသည်။ ထို့အတူပင် ““စားကောင်းလျှင် တခြားသူများကိုပြောပြပါ၊ စားမကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သာပြောပါ”” ဆိုသည့်စာတန်းမျိုးကလည်း စားသုံးသူကိုကျေနပ်စေသည်။
ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ်ထဲက လမ်းခွဆုံကွမ်းယာဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဒီလိုလေးရေးထားသည်။
“မနက်ဖြန် တကယ်အကြွေးရောင်းမယ်နော်”” တဲ့။ ရေးထားတာလည်း လှသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်သူမြင်သူ ကျေနပ်သည်။
စည်းကမ်းချက်ထုတ်ခြင်းက အဓိကလား၊ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်က အဓိကလားဆိုသည်ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြတာ ပိုအဆင်ပြေပါသည်။
““စည်းကမ်းပြည့်ဝသော နိုင်ငံတော်သစ်””ဆီသို့ အားလုံး ချီတက်နေကြပါသည်။
နေရာအနှံ့ပြည့်နှက်နေသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူပင် ဖြစ်သည်။ ။
← ၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ (ဇာတ်သိမ်း)	““အပြေးကောင်းသော ကျွန်တော်နှင့် တရားဥပဒေကို စိန်ခေါ်နေသော လူမိုက်များ”” →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...